သင်၏ iPhone တွင်အသံမှတ်စုများကိုတည်းဖြတ်နည်း | ငါက Mac ပါ
သင်၏ iPhone တွင်အသံမှတ်စုများကိုတည်းဖြတ်နည်း
လျှောက်လွှာရန် အသံမှတ်စုများ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhones တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအများကြီးရနိုင်သည် အသုံးချ; အင်တာဗျူးတစ်ခု (သို့) အတန်းတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှမမျှော်လင့်ဘဲပေါ်လာသည့်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များကိုရေးသားခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ဒီနေ့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးမယ် အသံမှတ်စုများ ဒါကြောင့်သင်ကအစနဲ့အဆုံးမှာနှစ်ခုလုံးကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
သင်သည်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမှတ်စုများကိုယူမည့်အစားပြပွဲကိုအက်ပ်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ပိုနှစ်သက်သည်ဆိုပါစို့ အသံမှတ်စုများ တကယ်အရေးကြီးသောအရာကိုအာရုံစိုက်ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်အနီရောင်စံချိန်တင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသောအခါအစ၌, မိုက်ခရိုဖုန်းပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအရာအသုံးမကျခဲ့သည့်စက္ကန့်အနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ်အဆုံး၌သင်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကောင်းပြီ၊ ထိုအချိန်တွင်ပင်သင်၏ကိုယ်ပိုင် iPhone မှသင်လုပ်နိုင်သည် ထိုအသံမှတ်စုတိုကိုတည်းဖြတ်ပါ ၎င်း၏အစနှင့်အဆုံးနှစ် ဦး စလုံးအတိုကောက်။ အကယ်၍ သင်သည် Quick Time ကိုအသုံးပြုပါကဤနည်းလမ်းသည်သင်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးလိမ့်မည်။
အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ အသံမှတ်စုများ သင်တည်းဖြတ်လိုသည့်မှတ်တမ်းကို၎င်းနှင့်ကလစ် နှိပ်၍ ရွေးချယ်ပါ။
လက်ျာဘက်၌မြင်ရမည့် "shorten" icon ကိုနှိပ်ပါ။
Play ကိုအသာပုတ်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်ခဏမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်လိုသည့်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခေတ္တနားပါ။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်အစွန်အဖျားနှစ်ခု၌အနီရောင်လိုင်းနှစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဘယ်ဘက်ရှိအနီရောင်လိုင်းကိုဖိထားပြီးညာဘက်သို့ဆွဲယူပြီးသင်ရိုက်ကူးလိုသည့်နေရာကိုသတ်မှတ်ပါ။ Play ကို နှိပ်၍ ၎င်းမှန်သည်၊ မဟုတ်လျှင်၊ ၎င်းမျဉ်းကိုချိန်ညှိသည်အထိတစ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်သို့ရွှေ့ပါ။ အခုညာဘက်ရှိအနီရောင်မျဉ်းနှင့်အတူတူလုပ်ပါ၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းအဆုံးသတ်မည့်နေရာကိုဖြေရှင်းရန်ဘယ်ဘက်သို့ဆွဲချလိုက်သည်။ အပြာရောင်မျဉ်းကညာဘက်ကိုရွေ့သွားပြီးသင်ချုံ့လိုသည့်နေရာအတိအကျကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
သင်အလိုရှိသောချိန်ညှိချက်များပြီးဆုံးပါကသင်၏ပြင်ဆင်မှုကိုသိမ်းရန် "Shorten" ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုအခါသင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ တည်းဖြတ်ထားသည့်မူရင်းကိုသင်အရင်လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသိမ်းဆည်းပါ (သို့မဟုတ်ယခင်ဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်) သို့မဟုတ်အသစ်တစ်ခုသိမ်းထားခြင်းဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ။ ထို့ကြောင့်သင်မူကွဲနှစ်ခုလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။ သင်လိုချင်သောအရာကိုရွေးပါ။
သင်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက အသံမှတ်စုများ မလွဲစေနဲ့:
သင့် iPhone တွင်အသံမှတ်စုများကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
သင့် iPhone မှအသံမှတ်စုများကိုမျှဝေနည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » သင်၏ iPhone တွင်အသံမှတ်စုများကိုတည်းဖြတ်နည်း
Loreto Pino Moreno ဟုသူကပြောသည်
Loreto Pino Moreno အားစာပြန်ပါ
အသံမှတ်စုမှားကိုငါဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်မလိုချင်သောအရာကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ မူရင်းသို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း။ ဒါမှမဟုတ်ငါဆုံးရှုံးပြီးပြီလား
မာရီယာ del Carmen Bernhardt ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောညပါ! ငါမိနစ်အနည်းငယ်ပြန်ကစားနိုင်ပြီးအစသို့ပြန်သွားနိုင်သည့်အသံမှတ်စုများစွာကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးပြီ။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး ...... ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ ငါမျိုးပွားရန်အလွန်အရေးကြီးသောပစ္စည်းရှိသည်ကတည်းကငါလျင်မြန်စွာအဖြေတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မယ်
Maria del Carmen Bernhardt အားပြန်ကြားပါ
ဟယ်လို! ငါအသံမှတ်စုတိုကိုတည်းဖြတ်နေတယ်၊ ​​အယ်ဒီတာကိုပိတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာငါ့မှတ်စုတွေအားလုံးပေါ်နေတဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတယ်၊ ​​အခုငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ပေးပို့တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အပေါ်ကဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
သုံးလခန့်အကြာတွင် Infinite Loop Apple Store သည်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်
သင်၏ iPhone နှင့် Apple Watch တို့ကို Nomad Pod Pro နှင့်အားသွင်းပါ